Sheekada filimka Qarib Qarib Singlle: Irfan Khan markale filim wacan ayuu la yimid | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Qarib Qarib Singlle: Irfan Khan markale filim wacan ayuu la yimid
Sheekada filimka Qarib Qarib Singlle: Irfan Khan markale filim wacan ayuu la yimid
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka safarka jaceylka ah Qarib Qarib Singlle ee uu Irfan Khan hogaamiye ka yahay kaasi oo marwalbo la imaado fariin dadka raali galiso.
Jilaayaasha filimka Qarib Qarib Singlle: Irrfan Khan, Parvathy
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka Qarib Qarib Singlle: Irfan Khan safraka nolosha jaceylka xiisaha ay leedahay ayuu dib kuugu soo celinaa iyo atirishada Parvathy oo si wacan kuu soo jiidaneyso qaab jiliin iyo qurux.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Qarib Qarib Singlle: Ma jirto hal muuqaal oo ku caajis galinaayo waa filim caqliga u saaxiibka ah si maangal ahna loo sameeyay:
Daawo Ama Ha Daawanin: Irfan Khan hadii aad ka heshay qaab jiliinkiisii filimada Piku iyo Hindi Medium markaana xiiso weyn ayuu qaab jiliinkiisa kusii galin doonaa, hadii aad daawanin micnaheeda waa in Irfan bandhigiisa ku dhaafo.
Fariinta Filimka Qarib Qarib Singlle: waa filim ka hadlaayo fariin ahaan labo qof oo Internet-ka iska shukaansanayaan marka hore kadibna safar isla galayaan.
Jaya (Parvathy Thiruvothu) waa 35-jir carmal ama carmalo ah taasi oo seygeeda ka geeriyooday waxayna dareensan tahay in nolosheeda waxba u harin.
Jaya (Parvathy Thiruvothu) waxay la fal galee aalada casriga ah ayadoo ku biireyos Website lamaana yaaasha ku sheekeestaan si ay wehel qayaali ah halkaas kaga hesho waxayna ku darsaneysaa oo ay sheeko wadaagayaan gabyaaga 40-jirka ah ee lagu magacaabo Yogi (Irrfan Khan).
Yogi (Irrfan Khan) wuu kaftan badan yahay, wuu hadal badan yahay inta badana wuxuu jecel yahay inuu dadka dhibo asigoo dabci ahaan lidi ku ah Jaya (Parvathy Thiruvothu).
Laakiin Jaya (Parvathy Thiruvothu) waxay dareemeysaa Yogi inuu yahay midka kaliya oo ay is fahmi karaan laakiin Yogi wuxuu Jaya u sheegaa in noloshiisa sedex gabdhood uu xiriir jaceyl lasoo wadaagay inkastoo siyaabo kala duwan ku kala hareen hadana weli ay isaga xiiseeyaan ama aysan ka maarmin gabdhahaas madaama uu nolosha wax ka baray.
Yogi marka hore wuxuu usoo jeedinaa Jaya inay kulan wada qaataan ama is arkaan balse marka hore Jaya wey ka madax adeegii codsiga dhanka Yogi ka yimid laakiin ugu dambeyntii wey ka aqbalee inay kulmaan.
Yogi iyo Jaya waxay wada galayaan safar dheer oo dhanka dhulka ah waana safarka dhabta ah oo ay nolol ahaan isku fahmayaan sidoo kalena safarkaan ayaa sababi doono inay nolosha isla hana qaadaan ama ay kala haraan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Qarib Qarib Singlle: Gabadha filimkaan sameesay Tanuja Chandra waxaa lagu yaqiinay doorashada fariin adag oo qiiro leh ayadoo caan ku ahayd filimada Dushman (1998) iyo Sangharsh (1999).
Balse markaan waxay dooratay fariin sahlan oo si sahlan loo dhigay laakiin si wacan loo qaabeeyay waxayna ku amaantay Tanuja sida sheekada filimka Qarib Qarib Singlle oo sahlan ay ugu dabqaday nolosha xiligaan caalamka ka jirto iyo sida aalada casriga ah xiriirada qaar dhismahooda kaga qayb qaadato.
Waxaa kaloo amaan mudan Kamna Chandra oo sheekada filimkaan qortay madaama si heer ah isugu xijisay qoraalka muuqaalka loo badalay filimkaan.
Si guud Qarub Qarib Singlle inuu filim wacan noqdo waxaa sabab u ah kooxda ka shaqeesay sheekadiisa iyo jilaayaasha filimkaan oo u hagar baxeen.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Inaba caadi ma ahan bandhiga uu Irfan Khan la yimid marka uu shaashada soo galo ilaa filimka ka dhamaanayo hadal walbo uu adeegsanayo waa mid micno leh waxaaba kasii daray gabayada uu adeegsanayo, xidigaan wuu talaabsaday mashruuc walbo ee uu sameeyo libinta kowaad qof ka qaadan karto ma jirto!
Parvathy Thiruvothu awood weyn ayay lasoo baxday qof Bollywood-ka ka yaqaan ma jirto xitaa aqriste waxaa macquul ah in magaceeda maanta kugu cusub yahay balse filimkan wixii ka dambeeyo waa hubaal inay aqoonsi weyn heli doono madaama bandhig heer sare ah la timid waxay mudan tahay abaal marin in sanadkaan la siiyo.
Neha Dhupia iyo doorkeeda Anjali waa mid wanaagsan oo isagana filimkaan xiiso u yeelayo waana qofka sedexaad ee ugu bandhiga wanaagsan.
Gunaanad: Qarib Qarib Singlle waa mid ka mid ah filimada fariinta waaqiciga ah xambaarsan hab mada daale ahna loo sameeyay sidoo kalena sheeko ahan lagu cesh ceshan karo daawashadiisa.
Inkastoo aan xayeysiin balaaran loo sameynin hadana hadal heyntiisa filimkaan ay aad u hooseyso hadana waa qasab in maal maha sabtiga iyo axada dadka reer magaalka ah usoo daawasho tagi doonaan mashruucaan.
Dadka filimada ka faaloodaan filimka Qarib Qarib Singlle waxay siiyeen 4/5 ama afar xidig taasi oo muujineyso in fariintiisa aad u wacan tahay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Qarib Qarib Singlle:
Waxaa Aqrisay 826